Iftiiminta: Suuqa Waddada CMS iyo Ecommerce | Martech Zone
Arbacada, Agoosto 24, 2011 Sabtida, Janaayo 23, 2021 Douglas Karr
Marketpath waxay bixisaa naqshadeynta degel xirfadeed, horumarin, iyo adeegyo fulineed oo raacaya Marketpath 5D's: Baro, Naqshadeeyo, Samee, Gaarsiin, iyo Wadid.
Suuqa wuxuu ku yaal halkan gobol ahaan waxaanan la wadaagnaa qaar ka mid ah macaamiisha. Marketpath waxay qabatay shaqo aan caadi ahayn oo ay ku bixinayso CMS dhammaystiran oo isku-darkaaga ah nidaamka maamulka content iyo doorasho dukaanka ecommerce dadaal la'aan.
Halkaan Matt Zentz, Agaasimaha Guud iyo Aasaasaha, iyo Kevin Kennedy, Sarkaalka Suuqgeynta Madaxa, waxay ka wada hadlayaan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda ay siiyaan macaamiishooda. Waxay qabteen shaqo weyn oo ah cusbooneysiinta CMS-kooda si ay uga faa'iideystaan ​​labadaba raadinta iyo moobiilka macaamiishooda - liistada sii socota sii kordheysa sanadba sanadka ka dambeeya!
Thanks to nala-hawlgalayaasha fiidiyowga ee 12 Xidigood Media wax soo saarka weyn!
Tags: 12 xiddigaha warbaahintasentimitirnidaamka maamulka contentwareysiKevin kennedymatt zentz
Video: Suuqgeyntu ma sameysaa sheyga?